Sei tichirota pamusoro pehunuts?
Kana iwe ukamuka, unoyeuka kurota kwako mune zviduku zvishoma, zvino pane mukana wekudzidza chimwe chinhu pamusoro pehupenyu huri mberi. Kuti uite izvi, kutanga chengorora zvaunoona, uchifungisisa mutoro wemanzwiro. Itawo kuenzanisa pakati pemashoko akawanikwa uye zviitiko zvehupenyu chaihwo.
Chii chinonzi walnut kurota?
Kazhinji pane zvisiri izvo, kurota kwakadaro chiratidzo chakanaka, chinofananidzira kubuda kwemufaro akasiyana uye nguva dzinofadza. Kunyange zvakadaro inogona kuva maziso ekubudirira munharaunda yorudo. Kana nutswa dzakaparadzwa uye zvisina kukodzera kudyidzwa - iyi nyevero yokuti tarisiro dziriko dzisina kuzadzika, zvakanyanya kuora mwoyo zvinokumirira iwe. Kune vasikana, kurota uku ndechekufungidzira kwekutengesa pane chikamu chemudiwa. Kurota kwaunofunga nayo walnuts kunoratidza kuti iwe munguva pfupi uchange uchinge usina maturo kunetseka. Mune rimwe remabhuku ekurota pane ruzivo maererano nezvakadaro kurota kwakadaro kunopikira kukunda pamusoro pevavengi. Kune mumwe munhu anorwara, pane zvinonaka zvemarnuts muroto - ichi chiratidzo chekurumidza kupora.
Kana iwe uchigunzva michero kubva pamuti chiratidzo chokuti mune ramangwana iwe uchafanira kuwana ukama nemunhu uye izvi zvichaita kuti hukuru hukurukure mune ramangwana. Hope walnuts, iyo yawakanyora uye yaidya, zvinoreva, kunouya "white band", unogona kutarisira kubudirira mumamiriro ose ehupenyu. Kana iwe ukavhuna muvhu, iwe wakaona kusakosha-chiratidzo chechetambudzo tuduku uye kuvhiringidzika kwakasiyana-siyana. Usanetseka, Iyi nguva haizoperi kwenguva refu uye kurasikirwa kuchave kusina basa. Usiku hwekuona, uko iwe unogona kukanganisa matnuts, unofunga kuti uchakunda zvipingamupinyi. Mukurota kuti uone watoona pepa walnuts, zvinoreva, unogona kutarisira kukunda kukuru mberi. Mumwe muturikiri wehuroti unogona kutora mukana uye kutamba bheroti kana kutora chikamu mune imwe mhando ye rally.
Kurota umo marimu anoparadzirwa ndeye chiratidzo chekutengeserana kunobatsira, uye chipo chichauya zvachose zvakakwana. Kuunganidza marununu kubva pasi muchiroto kunoreva iwe unonzwisisa kuti hausi kubata munhu waunoda zvakanaka. Kana iwe uchiunganidza michero kubva pasi - ichi chiratidzo chokuwanda. Rimwe bhuku rinorota rinopa mamwe mashoko, maererano nehope, iyo yaifanira kuunganidza nutswe, inofanirwa mamwe matambudziko. Nutswe nemakona makuru ndiwo chiratidzo chemamiriro akasimba emari.
Ko mazai anovhenekera Utatu here?
Sei usingakwanisi kugara patafura?
Ko maggots anoita sei?
Sei uchirota pamahombekombe?
Sei tichirota pamusoro pokubata hove?
Chii chinonzi tattoo chirota pamusoro?
Zviratidzo zveKusi - zviratidzo zvevanhu zveMwedzi mwedzi
Nei ndine zino kurasikirwa?
Pinera kubva kune ziso rakaipa - kuti ungapfeka sei?
Sei mazambiringa achirota mudzimai?
Sei uchirota uchizadza pasi nemutsva?
Nzira yekugadzirira Sei Mutsara Mutsvene?
Jam kubva kumabhilikiti - akanaka uye akaipa
Broth of leaf leaf - yakanaka uye yakaipa mu cosmetology nemishonga
Shoes-antitrend: 10 mienzaniso yezvigamba, izvo zvatove zvisiri nyore!
Nhamba yechinomwe mumatareji
Mukati - ndiani uyu uye sei kuti ave mumwe?
Jason Priestley akarova Harvey Weinstein
Man Scorpio murudo
Mutori wenhau Zendai achifananidza nemifananidzo kushandiswa kweglossies
Nechokupfeka jacket yakareba?
Cold beetroot soup nesusu
Reflux gastritis - zviratidzo uye kurapa
Flakisi yekurema kurasikirwa - recipe
Vitamine kune imbwa
Sirivo kubva pamuzambiringa
Chii chinonzi t-shirt refu yemaoko?